Otu esi egosi njikọ WiFi dị ka Hotspot na gam akporo | Gam akporosis
Eleghị anya na ihe karịrị otu oge na mgbakwunye na netwọkụ WiFi anyị nwere ike ịchọta na ụlọ mmanya, kọfị na họtel; na njikọ data anyị na nkwekọrịta anyị na oku anyị na onye na-eweta data, anyị na-eji njikọ ịntanetị guzobere site na ngwaọrụ ndị ọzọ. Ngwaọrụ ndị a nwere ike ịbụ ọnụ ekwentị mkpanaka ọzọ ma ọ bụ mbadamba, na-arụ ọrụ ịntanetị, ma ọ bụ ngwa ndị ezubere iji nwee ike iburu ya data site na njikọ ikuku na ngwaọrụ dị iche iche, dị ka ọ dị na MiFi modem. Agbanyeghị, ọnụahịa data anyị nwere na njikọ nke ụdị a pere oke, ma taa anyị ga-egosi gị otu esi agwa ekwentị gị na ọ kwesịrị iburu nke a.
N'ezie, na ọhụrụ version nke gam akporo, gam akporo 4.4, nhọrọ ndị a ezoro ezo ntakịrị, mana ọ bụ ihe ọ bụla dị njọ, n'ihi na taa na Androidsis anyị na-akụziri gị ka ịchọta ha yana kachasị ịhazi ọnụ gị ka enweghị ụjọ na ụgwọ ahụ na njedebe nke ọnwa, ọkachasị ma ọ bụrụ ikpe gị na ị nwere atụmatụ na-anaghị amachi nbudata nke data, ma na-aga n'ihu na-enye gị ohere ịnyagharịa na ọsọ ọsọ site na iji data ọhụrụ ejiri ebubo iche.
Egosi a WiFi njikọ dị ka a Hotspot na gam akporo
Site na ndabara, Android na-amata ndị ọzọ Ngwaọrụ gam akporo dị ka ngwaọrụ mkpanaka nwere njikọ data 3G na ọ tinyeworị ha na nhazi nke mbụ maka ụdị njikọ a, na-amachi, dịka ọmụmaatụ, nbudata ndabere, mmelite akpaka ma ọ bụ nhọrọ dị elu na ụfọdụ ngwa dịka nbudata vidiyo WhatsApp na-ebughi ụzọ rịọ ikike. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịkekọrịta njikọ ahụ site na ọdụ ọzọ ọzọ karịa sistemụ arụmọrụ gam akporo ma ọ bụ site na modem maka ebumnuche a, mgbe ahụ ị ga-agbaso usoro ahụ anyị kọwara n'okpuru n'okpuru site na nkwụsị.
Ihe mbu bu iji nweta menu mbu na gam akporo ma họrọ taabụ data ojiji.
Họrọ akara ngosi na-egosi na akuku aka nri nke ekwentị gị iji gosipụta nhọrọ ndị a.
Ga ahụta ihuenyo dịka nke dị na nseta ihuenyo nke anyị ji meghee nkuzi taa.
Iji nwee ike ịhazigharị njikọ mkpanaka na 3G site na ngwaọrụ ndị ọzọ, anyị ga - ahọta taabụ mkpanaka mkpanaka iji nweta nseta ihuenyo a:
Ọ bụrụ na enwere m njikọ ọ bụla nke ụdị a ahaziri, nke na-abụghị nke m, ndepụta ahụ ga-apụta ebe ekwesịrị Netwọk WiFi. The Mbido usoro ga-aga n'ihu site na-ahọpụta ya dị ka ndị dị otú ahụ na ịpị Emela. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-egosi na ngwaọrụ anyị nke kwuru njikọ ahụ, ọbụlagodi na ọ bụ WiFi, enweghị data na-akparaghị ókè, yabụ na anyị chọrọ ka ọ tinye ihe mgbochi iji zere mmefu ndị na-enweghị isi.
Na ụzọ a dị mfe, agbanyeghị na ị nwere ike chọpụta na ụfọdụ mgbochi etinyere na ndabara na ngwa ahụ na-eme ka ị ghara igbu oge karịa, dị ka nbudata akwụkwọ ntuziaka nke vidiyo sitere na WhatsApp, ị ga-ahụkwa oke data data mkpanaka maka kaadị ị nwere etinyere ya na ọdụ ọzọ ma ọ bụ na ekwentị nwere SIM, ha anaghị agbanahụ aka gị, ihe dị n'etiti nbudata na ịlele ọdịnaya multimedia dị mfe ịme. Ihe anyi kowara gi bu usoro a ga egosi gi n’ebe a WiFi njikọ abụghị ADSL ma 3G n'ihe banyere nwelite OS kachasị ọhụrụ, Android 4.4.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Otu esi egosi njikọ WiFi dị ka Hotspot na gam akporo iji zere ị excessiveụbiga mmanya ókè
Ezie na anyị na-enweta oku oku na WhatsApp, ebe a bụ ụfọdụ na-akpali ọzọ